Gudoomiyaha Maxkamadda Sare oo Fariin Dardaaran ah u Jeediyey Madaxda Gobolka Togdheer – WARSOOR
Burco – (warsoor) – Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Prof Adan X Cali Axmed ayaa ku amaanay Madaxda Gobolka Togdheer wada shaqeynta u dhexeysa, kulana dardaarmay inay shaqada Qaranka meel uga soo wada jeestaan.
Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Mr Xasme oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimada wada shaqeynta u dhexeysa masuuliyiinta gobolka joogta, waxaanu yidhi, “Waanu bogaadinaynaa hawsha aad u timaadeen oo ah hawl-fududeyn dhinaca Caddaaladda ah u samayseen dadkii Hargeysa idiinku iman lahaa ama barriga fog ee Somaliland ka iman lahaa, inaan guryahoodii ugu timaadaan. Bahda caddaaladduna qaabka ay hawsha u wadaan waa tusaale fiican.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Prof Adan X Cali Axmed oo kulanka soo xidhay ayaa faahfaahin ka bixiyey hawlaha u qabsoomay mudadii ay socdaalka shaqo ku joogeen Gobolka Togdheer, waxaanu yidhi,“Hawlaha Maxkamaddii Sare een soo rarnay, dacwado badan ayey galeen oo Ciqaab iyo Maddani ah, meelo magaalada ka baxsana dacwado ayey ku soo dhegeysteen.
Gudoomiye Adan ayaa sheegay inay jiraan dacwado maxkamadda sare go’aamo ka soo saartay, waxaanu yidhi. “Dacwado haatan lagu dhawaaqay ayaa jira, dacwadahii fududaa oo dhan, hadday tahay qeybta ciqaabta ama maddaniga, kuwo kale waa lala noqonayaa oo ka fiirsasho badan ayey u baahan tahay.” Ayuu yidhi Gud Adan. Isagoo raaciyey.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare, ahna Gudoomiyaha Guddiga Caddaaladda & Gudoomiyaha Maxkamadda Dastuuriga Prof Adan X Cali Axmed oo weedho dardaaran ah u jeediyey madaxdii ayaa yidhi, “Gobolka Togdheer si sharaf leh ayaad u wada shaqeysaan, laakiin, marwalba Dawladnimmadu waa xubin keliya, markaa, Qaranka loo shaqeynayo in dhinac looga soo wada jeesto waa lama huraan.”